Windows 10 ကိုဘယ်လိုအခမဲ့ install လုပ်မလဲ Gadget သတင်း
Windows 10 သည် Microsoft နှင့်ဈေးကွက်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စတင်ခဲ့သည့် Windows ၏အကောင်းဆုံးဗားရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Windows 8 နှင့် Windows Vista တို့၏ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Windows7နဲ့ Windows XP တို့ဟာ Microsoft လိုချင်တဲ့အချိန်မှာအရာရာတိုင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်တဲ့အခြားဥပမာကောင်းတွေပဲ။ ၀ င်းဒိုး ၁၀ သည် ၀ င်းဒိုး ၇ နှင့်အကောင်းဆုံး Windows 10.x ကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကောင်းသောအရာများရှိကြောင်းယုံကြည်ရန်ခဲယဉ်းသည်။
Windows 10 ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်နွေရာသီမှာဈေးကွက်ထဲ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးနှစ်တွင် Microsoft သည်တရားဝင် Windows 2015 (သို့) Windows 7.x လိုင်စင်ရှိသူအားလုံးအားနံပါတ်လိုင်စင်ကို အသုံးပြု၍ အခမဲ့ Windows သို့အခမဲ့အဆင့်မြှင့်တင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ Windows ၏ဗားရှင်းများ၏။ သို့သော်ပထမနှစ်ကုန်လွန်သွားသောအခါထိုသို့ပြုရန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ သို့တိုင်၊ သင်လုပ်နိုင်ရန်သင်အနည်းငယ်လှည့်စားမှုကိုပြသသည် Windows 10 ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်အခမဲ့လိုင်စင်ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ.
မှန်ပေမယ့်၊ Microsoft ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်နိုင်ခြေများပေးပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows 10 ၏မိတ္တူကို Windows7သို့မဟုတ် Windows 8.x လိုင်စင်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပါဒီအခွင့်အရေးကိုရယူနိုင်ဖို့အတွက်နိုးနိုးကြားကြားရှိဖို့လိုတယ်၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကဒီအကြောင်းကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကြေငြာမှုမလုပ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုနားလည်သဘောပေါက်တဲ့သုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင်သူတို့ကသုံးစွဲသူများကိုတတ်နိုင်သမျှများများထံရောက်ရှိအောင်ကြိုးစားသော်လည်း သူတို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်ရောက်ရှိဖို့။
1 Windows 10 ကဘယ်လောက်ကျလဲ
1.1 Windows 10 ကိုစျေးနှုန်း
2 Windows Insider ဆိုတာဘာလဲ
3 Insider ပရိုဂရမ်ကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲ
4 Insider အစီအစဉ်၏အားသာချက်များ
5 Insider အစီအစဉ်၏အားနည်းချက်များ
Windows 10 ကဘယ်လောက်ကျလဲ
၀ င်းဒိုး ၁၀ ကကျွန်တော်တို့ကို ၀ င်းဒိုးဗားရှင်းအမျိုးမျိုးပေးထားတယ် အသုံးပြုသူများနှင့်ကုမ္ပဏီများအားလုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖုံးလွှမ်း, သို့သော်အသုံးပြုသူများကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသောသူများမှာမူ Home နှင့် Pro ဗားရှင်းများဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူအများစုသည် Home version ကိုရွေးချယ်သည်၊ ၎င်းသည်ပထမနှစ်အတွင်းအခမဲ့ update လုပ်နိုင်သောကြောင့်သာမကအိမ်၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများ။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သို့မဟုတ်အထူးလိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါသောမူကွဲလိုအပ်သည် ဝေးလံသောကွန်ပျူတာများနှင့်ဆက်သွယ်မှု၊ Pro ဗားရှင်းသည်ငါတို့လိုအပ်သည်။ Home 10 နှင့် Windows XNUMX တို့၏စျေးနှုန်းများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Windows 10 ကိုစျေးနှုန်း
Windows ကို 10 မူလစာမျက်နှာ များအတွက် Microsoft Store တွင်စျေးနှုန်းသည် 145 ယူရို.
Windows ကို 10 Pro ကို များအတွက် Microsoft Store တွင်စျေးနှုန်းသည် 259 ယူရို.
Windows Insider ဆိုတာဘာလဲ
၂၀၁၅ နွေရာသီတွင် Windows 10 ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းမထွက်ခွာမီလအနည်းငယ်အကြာတွင် Redmon အခြေပြုကုမ္ပဏီသည် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည် အများပြည်သူ beta အစီအစဉ်ကိုဒါကြောင့် ၀ င်းဒိုးဗားရှင်းသစ်ကိုစမ်းသပ်ချင်တဲ့သုံးစွဲသူအားလုံးကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ ဤမိုက်ကရိုဆော့ဖ်အများသုံး beta ပရိုဂရမ်ကို Windows Insider ဟုခေါ်သည်။
Windows Insider ကကျွန်တော်တို့ကို Windows 10 beta, လတစ်ခုချင်းစီကို install လုပ်ခွင့်ပေးတယ် သူတို့နောက်ဆုံးဗားရှင်းအတွက်ဖြန့်ချိမီ။ ဒီပရိုဂရမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြန့်ဖြူးရန်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပေးထားပြီးနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသို့မရောက်ရှိမီအသစ်အသစ်များလက်ခံရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။
တဖကျတှငျကြှနျုပျတို့၌ရှိသည် အမြန်လက်စွပ်။ ဒီလက်စွပ်ကကျွန်တော်တို့ကို Microsoft filter ကိုလွန်သွားသည်နှင့် Windows 10 အသစ်တည်ဆောက်မှုကိုပျော်မွေ့စေသည်။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူအသိုင်းအဝိုင်းကသူတို့လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းတွေ့ရသော bug များအားလုံးကိုသတင်းပို့ရမည်။ ၎င်းသည်ပွတ်တိုက်ဗားရှင်းမဟုတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများစွာကိုကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသည်။
El နှေးကွေးသောလက်စွပ်Windows 10 ကိုဈေးကွက်သို့မရောက်ရှိမှီသတင်းကိုခံစားရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤလက်စွပ်၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်သောအသုံးပြုသူများသည်နောက်ဆုံးပေါ်ရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးတည်ဆောက်မှုပုံစံကိုရရှိထားသဖြင့် bug အရေအတွက်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ ဒီလက်စွပ်ကိုရောက်ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်တည်ဆောက်, ယခင်ကအစာရှောင်ခြင်းလက်စွပ်ဖြတ်သန်းပါပြီ။ အခုဆိုရင် Windows 10 မှာပါတဲ့ feature အသစ်တွေကိုခံစားနိုင်ဖို့အလျင်အမြန်ပေါ်လာပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့မှာလိုင်စင်မရှိတဲ့အတွက် Windows 10 ကို install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဗားရှင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားချင်တယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Microsoft ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ တရားဝင် ISO version ကို download လုပ်ပါ ငါတို့ install ချင်တယ် ကွန်ပြူတာကို USB ချိတ်ပြီး install လုပ်လိုက်ပါ.
တပ်ဆင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ သင်သည်လိုင်စင်နံပါတ်ကိုတောင်းဆိုသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ် ၀ င်းဒိုးအောက်ခြေတွင်လိုင်စင်မရှိကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျော်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ installation ကိုဆက်လုပ်နိုင်သည် ငါတို့အသင်းထဲမှာ။ တပ်ဆင်မှုပြီးသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက် Microsoft သည် Windows 10 ၏လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲရက် ၃၀ အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးနောက်၎င်းသည် Windows configuration settings ကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ္တူကူးယူပြီးသောအခါ၊ Start menu ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ cogwheel မှတဆင့် Windows configuration options ကိုကျွန်ုပ်တို့သွားသည်။ ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ Update နှင့်လုံခြုံရေး။ ဘယ်ဘက်ကော်လံတွင်၊ Windows Insider ပရိုဂရမ် နှင့်ညာဘက်ကော်လံထဲမှာ Start ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Windows 10 က Insider ပရိုဂရမ်နဲ့ဆက်သွယ်ချင်တဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုထပ်ထည့်ဖို့ပြောလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည် @outlook, @ hotmail ဖြစ်စေ Microsoft မှဖြစ်သင့်သည်။ ပုံမှန်ဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Insider ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုလိုသောကျွန်ုပ်တို့၏ Windows session အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်ပါ။
နောက်ပြီးမည်သည့်လက်စွပ်အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရမလဲ။ ငါတို့ရွေးရမယ် ငါ့ကိုအစောပိုင်း updates များကိုပို့ပါ ကျနော်တို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုလျှင် အမြန်လက်စွပ် (အကြံပြုသည်မဟုတ်) သို့မဟုတ် Windows ၏နောက် versionငါတို့က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုလျှင် နှေးကွေးသောလက်စွပ် (အကြံပြုထောက်ခံချက်) ။
နောက်ဆုံးတွင် Windows သည်ဖိုင်တွဲများစွာကိုဆက်လက် download ပြုလုပ်ပြီးကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်စတင်ပါလိမ့်မည်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို အချိန်ကြာနိုင်တယ်ဖိုင်များကို download လုပ်ရန်သာမက Windows ကို restart မလုပ်မီ၎င်းတို့ကိုလည်း install လုပ်ရန်လိုသည်။ စိတ်ရှည်ပါ။
ဒီပရိုဂရမ်ကသင့်ကိုပေးတဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ Microsoft ကသူ့ရဲ့နောက်ထပ် Windows ဗားရှင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ့်သတင်းအားလုံးကိုခံစားနိုင်မှာပါ။ နောက်အားသာချက်တစ်ခုကမင်းကိုဒီဆောင်းပါးဆီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ် Windows 10 ၏တရားဝင်မိတ္တူကိုအသုံးပြုပါ Window မိတ္တူတစ်ခုမှတ်ပုံတင်စရာမလိုဘဲလိုင်စင်ဝယ်ယူရန်မလိုပါ။
Windows 10 beta ပရိုဂရမ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွန်ုပ်တို့၏မူကွဲသည် desktop ၏အောက်ခြေထောင့်ရှိစာသားကိုပြလိမ့်မည် ဗားရှင်းကျွန်တော်တည်ဆောက်အရေအတွက်နှင့်အတူစမ်းသပ်နေကြသည်။ သင်နောက်ခံပြောင်းသည်ဖြစ်စေမပြောင်းသည်ဖြစ်စေဤစာသားကိုပြသလိမ့်မည်။
ဤပရိုဂရမ်ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအခြားကြီးမားသောအားနည်းချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့ခံရနိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းမတည်ငြိမ်မှု၊ ၎င်းသည် beta ဖြစ်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကအရေးကြီးသောအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့ဂရုမစိုက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးနေသည့်မိတ္တူတစ်စောင်ကိုအစဉ်မပြတ်သိမ်းဆည်းထားလျှင်၎င်းသည်ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Windows 10 ကို box ထဲမသွားဘဲအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီ program အတွက် sign up လုပ်တဲ့အချိန်မှာ၊ ကျနော်တို့နှေးကွေးလက်စွပ် join ရမယ်မြန်ဆန်သောလက်စွပ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောတည်ဆောက်မှုများသည်အမြဲတမ်းရောက်ရှိနေပြီး၎င်းကိုမရောက်ရှိမီတွေ့ရှိခဲ့သည့်အမှားများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်အတွက်တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်နှေးသောသံကွင်း၏ဗားရှင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်သုံးစွဲသူများထံရောက်ရှိသွားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ကွန်ပြူတာများ » Windows 10 ကိုဘယ်လိုအခမဲ့ install လုပ်မလဲ
Sonos စပီကာများသည် AirPlay2နှင့်လိုက်ဖက်သည်